आधारभुत कुराहरु नै नभई बिद्यालयहरु कसरी बालमैत्री घोषणा हुँदैछन् ? – Palpa Samachar
आधारभुत कुराहरु नै नभई बिद्यालयहरु कसरी बालमैत्री घोषणा हुँदैछन् ?
By palpa samachar	 On Jan 30, 2020
पाल्पा । जिल्लाका बिभिन्न स्थानीय तहहरुले अहिले धमाधम स्थानीय बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम अन्र्तगत बालमैत्री घोषणाका कार्यक्रमहरू अगाडि सारिरहेका छन् । बगनासकाली गाउँपालिका भित्रका सबै बिद्यालयलाई बालमैत्री घोषणा गरिसकिएको छ भने रम्भा गाउँपालिकाले अहिले बिभिन्न बिद्यालयहरुलाई बालमैत्री घोषणा गर्दैछ । हुन त बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमले हरेक तहमा बालबालिकाहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ । यसर्थ पनि घोषणा हुनु भनेको राम्रो बिषय हो । घोषणाले हरेक तहमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता कायम गर्दछ । तर हामीले कतिपय सन्दर्भमा घोषणाका लागि घोषणा मात्रै गर्दैछौं कि भन्नेबारे एक पटक सोच्नै पर्ने बेला आएको छ ।
बालमैत्री घोषणा गरिएका बिद्यालय के साँच्चै बालमैत्री छन् त ? बालमैत्री घोषणा गर्नुअघि ती बिद्यालयमा के के आधारभुत बिषयहरू थप गरियो ? यो बिषयमा अव छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले जति पनि बिद्यालय बालमैत्री भयो भनिएका छन् वा घोषणा गरिएका छन् ती बिद्यालय बास्तवमा बालमैत्री छैनन् । के बिद्यालयका कक्षा कोठा र बाहिरी बातावरण बालमैत्री छ ? सौचालय बालमैत्री छ । बिद्यालयमा छात्रा बिद्यार्थीका लागि सेनेटरी प्याडको ब्यवस्था त छ तर लगाउने कोठा र बिसर्जन गर्ने कोठा छ त ? के बिद्यालयका बालबालिकाले स्वच्छ पिउने पानी पाएका छन् ? यस्ता धेरै बिषयहरु बिद्यालयमा उपलब्ध छैनन् । अहिले पनि धेरै बिद्यालयका सौचालय पसिसक्नु छैनन् । अधिकांशमा चुकल समेत छैनन् । बिद्यालय अगाडि पछाडिबाट गुडेका सवारीको धुलो सिधै कक्षा कोठामा पुग्छ यावत समस्या धेरै छन् तर बालमैत्रीका नाममा बालमैत्री घोषणा गरिएका छन् ।
यसर्थ बालमैत्री घोषणा गर्नु ठूलो कुरा होइन । बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम अन्र्तगतका सूचकहरू पुरा भएका छन् कि छैनन् यी बिषयमा गतिलो गरि समिक्षा गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि अपांगता भएका बालबालिका बिद्यालय बाहिरै छन् । ती बिद्यार्थी बिद्यालयमा भर्ना देखिन्छन् तर उपस्थित छैनन् । कम्तीमा बालमैत्री बिद्यालय घोषणा अघि त्यो बिद्यालयका भवन संरचना कम्तीमा एउटा भएपनि अपांगता मैत्री हुनु आवश्यक छ । अर्कोतिर बालसहभागिता प्रतिनिधिको रुपमा मात्रै नभएर निर्णायक रुपमा हुने गरि बातावरण बनाईनु पर्छ । यसको पहिलो पक्ष बिद्यालय पूर्ण बालमैत्री बनाउने र अर्को बिषय बाल सहभागितालाई दरिलो बनाउनेमा घोषणा गरि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
पाल्पा समाचारपत्र बर्ष ९ अंक २८ को सम्पादकीय केही सम्पादन सहित फिचर स्तम्भमा प्रकाशन गरिएको ।
चापपानी अपडेटः चौपारी नै मास्ने पर्यत्न पुरै गैरकानुनी, स्पष्टीकरण लिने तयारीमा डिभिजन बन कार्यालय
शहिदहरूप्रति श्रद्धासुमन सहित समर्पित केही मुक्तकहरू